MARAQ RASPBERRY AH JIILAALKA: ISTICMAAL, CUNTO KARISKA OO LEH SAWIRO - RASPBERRY
Sida loo sameeyo macaanka raspberry guriga
Raashinka raspberry - daaweyn jecel caruurta iyo dadka waaweyn. Waxay kuqarmeeyaan dubista, cunista sonkorta leh cabitaan kulul, waxay ku faafinayaan rootiga. Waxaa loo diyaariyaa isticmaalka kulaylka iyo iyada oo aan lahayn. Qof kastaa wuu ogyahay sifooyinka wanaagsan ee raaxeysigan. Waxaan dooneynaa inaan kula wadaagno cuntooyin aad u fiican oo fudud si aad u samayso suugada raspberry.
Faa'iidooyinka delicacies delicious
Cajiibka Raspberry waxa uu helay caan ah sababtoo ah dhadhankiisa, muuqaalka cuntada, wax yar oo karinta wax lagu kariyo, waqtiga kaydinta iyo faa'iidada.
Ma taqaanaa? Giriigyadii hore waxay u adeegsadeen raspberries oo ujeeddooyin daaweyn ah: waxay sameeyeen daaweyn qaniinyo ah oo qaniinyo ah iyo abeesooyin ka soo jeeda ubaxa.
Faa'iidooyinka raaxada leh ee ay ka kooban tahay ka kooban. Waxaa ku jira fitamiino (A, E, C, B1, B2, B9, PP), macdan (potassium, calcium, magnesium, sodium, fosfooraska, birta). Waxaa jira ficil aan lahayn dufan, qadar yar oo borotiin ah, carbohydrates badan iyo fiyuusta cuntada.
Haddii aad isku daraysid sifooyinka wanaagsan ee macmacaanka raspberry ee liiska ku jira, waxay u ekaan doontaa sidan:
Maadaama raspberry uu leeyahay guryaha dabiiciga ah, sucker waa silvery, barberry, Rhodiola Rosea, meadowsweet, blackberry, viburnum, Cornel, heather, caajis.
Shaaha leh jamciga raspberry wuxuu ka mid yahay tobanka ugu caansan, caansan, iyo ugu muhiimsan, awoowe wax ku ool ah ee daaweynta hargabka. Marka uu qaabkeedu diirran yahay, waxay ka qayb qaadataa dhidibada kordheysa. Iyada oo la raacayo dareeraha, fayruusyada iyo kuwa kale ee waxyeellada leh ee ka soo horjeeda cudurka waa laga tirtiraa jirka. Natiijo ahaan, heerkulkiisu wuxuu ku dhacaa heerkulku, wuxuuna si deg deg ah u soo kabanayaa.
Sidaa darteed, haddii cudurada faafa ee fayruuska, hargabka, kulaylka iyo madax xanuunka, mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu hagaajin karo xaaladda bukaanku waa cabitaanka shaaha leh macmacaanka raspberry ee laga sameeyay mid ka mid ah hilibka macmacaanka ah oo lagu qasi karo 300 ml oo biyo kulul. HUma baahnid inaad isticmaasho cabitaan noocaas ah - in ka badan 1.5 litir maalintii waa wax fiican.
Linden, dhir, cows, periwinkle, xiirto, basasha Hindiya waxay kaa caawin doonaan inaad ka takhalusaan madax xanuun.
Macmacaanka raspberry ayaa sidoo kale lagu tiriyaa awoodda:
ku yeeshaan saameyn ku leh mareenka mindhicirka;
Waxay hoos u dhigtaa da'da unugyada iyo maqaarka.
Waa muhiim! Looma baahna inaad macaankan u siiso carruurta ilaa seddex sano jir, si loogu isticmaalo haweenka uurka leh sadexdii bilood ee u dambeeyey iyo haweenka inta lagu jiro nuujinta. Raspberry waa alerjiga ugu xoogan, sidaas darteed, wuxuu kicin karaa horumarinta xasaasiyadaha xasaasiyadda ee noocyada kala duwan.
Si aad u diyaargarowdid cunto caafimaad leh, marka hore waxaad u baahan tahay inaad diyaariso alaabta ceeriin ah. Berry waa in la bislaado, laakiin aan ka weyneyn. Haddii aad ka soo qaadatay boggaaga, ma yeeli kartid. Haddii miraha la iibsado, ka dibna waxay u baahan doonaan in la soo saaro - ka saar baajinta, qaan gaadhin, jeexa caws iyo saxan, dhaqo oo qalalan. Waxaad u baahan tahay inaad ku dhaqdo suunka, adigoo ku dhex jira weel biyo ah.
Haddii si lama filaan ah aad u aragto in berry ay leeyihiin dirxiga ubaxa caleemaha, badeecada waxaa lagu badbaadin karaa by 10 daqiiqo litir oo biyo ah oo lagu daro 10 g oo cusbo ah. Ka dib marka daaweynta iyo ka saarista dirxiga dusha sare ee biyaha, raspberries waa in lagu maydho suunka leh biyo nadiif ah. Under running waa ma u qalantaa samayn, sababtoo ah diyaarad u dhaawici kartaa berry. Koolajiyuhu wuxuu marar badan ku dhufanaa weel biyo ah, oo dhanna waa in la dhigo.
Waxaan kugula talineynaa inaad barato raashinka mandarin, madow, lingonberry, hawo, miro, bocor, pear, cherry macaan, quince, Manchurian, currant cas, iyo saxaraha currant madow.
Dheriga ugu wanaagsan ee lagu karsado macmacaanku wuxuu noqon doonaa baaquli birta qallalan. Maqnaanshaha buug-gacmeedka noocaas ah. Kombiyuutarka iyo aluminium lama isticmaali karo.
Sare xajmiga raspberry
Sidaa darteed, waxaad bilaabi kartaa karinta macaanka. Si aad u bilowdo, u hesho barashada roodhida caadiga ah ee macmacaanka caadiga ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo cunto karinta fiidkii, sidaa daraadeed macmacaanka ayaa la faafiyaa habeenkii, berrinka waxaa lagu qooyay sonkorta wuxuuna bixiyaa casiir badan. Daaweeyn noocan ah waxaa lagu kaydin karaa ilaa laba sano.
Si aad isu diyaariso waxaad u baahan doontaa:
raspberries cusub - 1 kg;
sonkorta - 1 kg.
Macmacaanka sida ku qoran qariidada caadiga ah waxaa loo diyaariyaa sida soo socota:
Ku rid dhirtii diyaarisay ee baaquli.
Ku dar sonkorta.
Waxyaabaha la isku daro.
Leave for 12 hours - tani waa habka ka dhigaya macaanka weyn.
Aroortiina waxaad ku shubi kartaa weel yar oo raspberries ku yaalo dab yar.
Iska ilaali marmarka qaarkood, isku karkari.
Karkarinta karkarinta kadib 7-10 daqiiqadood. Markaad wax karineyso, si joogta ah uga saar xumbada.
Demi kuleylka oo ha macmacaan qabow.
Ku dhaq dhalooyinka iyo daboolka leh soodhaha iyo nadiifin kariyaal gaaban, foorno, ama ka sii dusha sare.
Ka dib qaboojinta, ku rid macaanka dabka iyo kasoobaxa.
Haddii aanad qaboojin, ku faafin bangiyada.
Is dabool daboolka.
Bangiyada waxay hoos u dhacaan oo qaboobaan.
Video: sida loo kariyo macaanka rasmiga ah.
Shan daqiiqo macaanka
Marka la karinayo raspberry-shan daqiiqo macmacaan, berry ayaa la mariyaa daaweynta kulaylka yar, taas oo macnaheedu yahay in ay sii hayaan inta badan qaybaha vitamin-macdanta.
Ma taqaanaa? In Russia, waxaa jiray cabitaan ah "cracker", taas oo laga sameeyey raspberry iyo berry cranberry.
Macmacaan waa in lagu kaydiyaa qol qabow oo qabow leh qoyaan yar. Waxaad isticmaali kartaa hal sano.
Tirada maaddooyinka 'shan daqiiqo' waxay u baahan doontaa mid la mid ah sida la soo koobay:
sonkorta granulated - 1 kg.
Baro sidoo kale sida loo sameeyo macaanka shan daqiiqo of strawberry duurjoogta ah iyo currant madow
Tilmaamaha talaabo-tallaabo ee ku saabsan sida loo sameeyo shan daqiiqo raspberry waxay u egtahay sidan:
Ku dabool faashinka ku jira weel wayn kaas oo macaanka isku karkari doono.
Si aad ugu jajabisid burushka qalalan ama ku xoq iyaga oo leh blender.
Frey raspberries daboolay sonkorta.
Ku walaaq qaado qaado alwaax.
Ku rid kuleyl dhexdhexaad ah iyo karkariyo.
Karkari shan daqiiqo. Markaad karisid, ka saar xumbada.
Ka qaad kuleylka 15 daqiiqo.
Iskudar dhalooyinka iyo karkari daboolka.
Kala badeecada bangiyada.
Video: Shan daqiiqo macmacaan raspberry ah
Jam aan karinta
Jam aan daaweyn kuleyl ah, ama diyaarin habka "kariska qaboojinta", ayaa sii kordhaya caan ka mid ah xafladaha sababtoo ah fududaynta karinta, ilaalinta tiro badan oo qiimo badan oo qiimo leh, dabcan, dhadhan fiican iyo caraf udgoon.
Waxaan kugula talineynaa in aad la tashato qashinka si aad u sameysid khamri iyo liinta.
Jam la kariyey iyadoon lahayn karkarin ayaa loo tixgeliyaa daaweynta ugu fiican ee hargabka. - Berry Fresh waa dhul leh sonkorta ama fructose. Sifadkan waxaa ku jira tirada ugu badan ee xubno qiimo leh. Ka dib markii daaweynta kulaylka, boqolkiiba weyn oo iyaga ka mid ahi ay u socdaan.
Alaabada la dhammeeyey waa in lagu keydiyaa qaboojiyaha ama qaboojiyaha. Nolosha shelf ee macmacaanka waa ilaa guga sanadka soo socda.
Cuntadani waxay u baahan doontaa:
sonkorta granulated - 1-1.5 kg.
Waxaad qaadan kartaa sonkor yar, laakiin kiiskan, macaanka ayaa u baahan doona in lagu keydiyo qaboojiyaha.
Akhri sida loo diyaariyo jiilaalka jiilaalka, juuska laga bilaabo canab, jelly laga bilaabo currants cas, currants, digirta suugada yaanyo, malayga leh xididdo yaanyo, yaanyo, squash, malmal iyo watermelon.
Si loo kariyo raspberries, dhulka leh sonkor, waa inaad:
In miro la diyaariyey ku shub sonkorta iyo isku daraan.
Ka dibna ka joogso caag ama silikoon.
Fasax afar ilaa shan saacadood si markaa sonkorta si dhammaystiran loo kala diro. Ku dabool saxarada leh faashad si looga hortago cayayaanka ama qashinka soo galaya alaabta.
Wakhti ahaanba raspberries waxay u baahan doontaa in la isku daro.
Shub on bangiyada qalalan jeermiska.
Ku dabool daboolka qallalan.
Video: sida loo kariyo maraq raspberry iyada oo aan wax karin
Macmacaan raspberry ah ayaa la adeegsaday canjeelada, cheesecakes, canjeelada, jalaatada. Waxay ku faaftaa rooti rooti ah. Waxay ka sameeyaan walxaha for pies, pies, qurxin keega. Waxaa sidoo kale lagu cunaa cabitaan kulul.
Waa muhiim! Ka hor intaanad bilaabin inaad wax cunaysid macaanka, waxaad u baahan tahay inaad iska hubiso in aysan haysanin halsano iyo huuri fangas. Macmacaanka macmacaanka ah iyo caanaha ayaa si adag loo mamnuucay isticmaalka. Alaabta maqan waxaa loo isticmaali karaa oo keliya isticmaalka winemaking.
Waxaan rajeyneynaa, ka mid ah talooyinkayaga, waxaad awoodi doontaa inaad soo qaado qashinka ku habboon oo diyaariya macmacaan aad u wanaagsan oo caafimaad leh kaas oo kuu oggolaan doona inaad la kulanto xilliga cudurada qabowga si buuxda u hubaysan.
Ra'yiga ka yimid isticmaalayaasha shabakada:
Anigu waxaan ka helay internetka, hooyadey sidey u karisay - marwalba waa mid aad u fiican!
1.2-1.5 kg oo sonkor ah
Badeecada rasiidhka leh sonkorta, iyadoo la isticmaalayo kala badh sonkorta loogu talagalay macmacaanka, kuna rid meel qabow 6-8 saacadood. Ka dibna kala sooc berry ka soo jiilka la sii daayay, ku dar sonkorta haray ee dambe iyo kuleylka si aad u karkariso, si ay u gebi ahaanba kala diri. Qabooji sharoobada wax yar, ku rid moyaha oo ku kari ilaa 15 daqiiqadood. Marka karkaraya badan oo xumbo ah ayaa istaagaya. Waxaa lagama maarmaan ah in la saaro qaaddo ama qaaddo, si taxadar leh u soo ururi bartamaha miskaha ee wareegga wareegga. Ka dib markii karinta, waxaa lagugula talinayaa inaad ku qaboojiso macaanka sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si ay u hayso midabaynta. Ujeedadaas awgeed, berkedda biyaha ayaa lagu ridi karaa biyo qabow ama baraf lagu daboolo. Ka dib markii la qaboojiyo buuxa macmacaanka ku duuban ee barmiilka loo diyaariyey.
Aabe baray inuu karsado macaanka. Sonkorta ee jasiiradaha kala duwan ayaa la dhigaa siyaabo kala duwan. Waxaan sonkorta ku ridaa miro aan miisaan lahayn laakiin mugga. Raspberry 1 / 1,2 sonkorta. hanta currant 1x1, oo leh miro yar oo aan mashquul ahayn, Ma jecli macaanka macaanka, laakiin saamiga ayaa ku faafaya noocyada kala duwan ee berry - miro ama macaan.
Hadda ku saabsan wakhtiga karinta iyo imtixaanka diyaargarowga. Asaas ahaan waxaan u kariyaa sidii aan ku dhahayo "shan daqiiqo", macaan deg deg ah. Laga soo bilaabo daqiiqad karkaraya, buuxa karkaraya, macaanka waa la kariyey ilaa 5 daqiiqo. Laakiin waxaan jeclahay "caleen gaboobay" iyo diyaargarow si aan u eego "hoos u dhicid". Cuntada inteeda kale maraqa sharoobada ee dhoobada dhaadheer. Dareemku waa inuusan faafin. Sidee qabow, qiyaastii 10 ilbiriqsi, waxoogaa yar oo la jeexjeexo iyo haddii dhibicku uusan dillaacin, ka dibna macaanka waa diyaar. Si kastaba ha noqotee, kaydinta muddada dheer ee ka baxsan qaboojiyaha, waxaan ku karkariyaa macaanka dheer, ilaa caramelization sonkorta. Xaaladdan oo kale, dhibicdu waa inaanay isla markiiba ka daadin diyaarad fudud. Waxaa laga yaabaa in uu qaado qaab muuqaal ah, ha daadin.
Shub dhalada isla markiiba ka dib karinta, kulul. Karkarinta ku rid dhalada, adigoo ka soo dhaqaya gudaha gudaha qaybta koowaad ee macaanka iyo qaybta oo dhan ku shub weel saxan kulul. On "shan-daqiiqo" top on ku shub 1 - 2 qaado oo sonkor ah. daboolka waxaa badanaa la dhejiyaa, laakiin ku yaalla weelka sanduuqa ayaa lagu duubay 4 jeer bac ah ee cuntada polyetylen. Waxay hagaajinaysaa adkeysi waxayna u oggolaaneysaa inaysan nadiifin daboolka oo isticmaali marar badan. On ciidda laisku karkariyey ma ku shubi karaa. Sonkorta caramelised waa ilaalin fiican.
Si dhakhso ah Bisaylkiisa ee berry ayaa bilaabi doona, oo waxaan rabaa inaan soo bandhigo cunto karis ah habka aan caadi ahayn ee samaynta macaanka jelly. Jelly waxaa lafteeda isku dhisaa iyada oo aan lagu darin gelatinka.
Waxaan qaadanaa 11 koob oo ah nooca berry ah, 12 koob oo sonkor ah, sonkor biyo ah. Waxay noqon kartaa wax kasta oo tallaabooyin ah, Waxaan qeexay saamiga loo baahan yahay. In kastoo laydhka. Sidaa daraadeed, waxaan gelin HALF, 6 koob oo ciid ah iyo hal galaas oo biyo ah dabka, karkari sharoobada, ka dibna ku shub nooca berry ah, wax kasta, xitaa xitaa xajin, waxay u shaqaysaa weyn). Karso muddo dheer, ilaa 10-15 daqiiqo. Ka dibna ka saar weelka dabka leh macaanka, hurdada waxaa kudhaca qeybta labaad ee sonkorta ka dibna walaaq ilaa kala diri.
Fiiro gaar ah, ma joojin karno! Sidaas darteed waa la burburiyaa! Marka dhan sonkorta kala diri, waxaan qaadanaa dhalooyinka pre-diyaariyay, oo doorbidaa 350-650 ml ee kartida, ku shub macaanka, iyo ku duub daboolka daawada. Waxaan ku rideyn daboolka illaa subaxda soo socota, ka dibna dib u rogo, eeg sida ay u quruxbaxayso meel ka baxsan derbiyada. Oo waxaa jiri doona joogtada jelly.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Raspberry 2019